Sidee loo maareeyaa faylasha isku dhafan ee GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Isu ururi oo ka Fariid GNU / Linux: Sawir muuqaal ah
Daabacaaddan waxaa loogu talagalay inay u adeegto hage ahaan ama buug tixraac ku saabsan codsiyada kala duwan ee garaafyada iyo gunta ah ee maareynta faylasha la duubay ku saabsan GNU / Linux Operating Systems (OS) iyo sida loogu isticmaalo in lagu gaaro adeegsi wax ku ool ah oo hufan iyaga.
Qaar ka mid ah codsiyada jira ee GNU / Linux, gaar ahaan sawirada, marka laga reebo inay xor yihiin, furan yihiin oo bilaash yihiin, sidoo kale waa barnaamijyo badan iyo qaabab badanSidaa darteed, badanaa waa laga isticmaali karaa Windows ama MacOS waxayna ku habboon yihiin qaabab fara badan oo riixo oo u dhashay nidaamyada kale ee hawlgalka.
2.1 Laga soo bilaabo Terminal
2.1.1 Siyaabaha Rakibaadda
2.1.2 Codsiyada la heli karo
2.2 Deegaanka Sawirka
2.2.4 Meelo badan
2.2.5 Kuwa kale bilaash, u furan ama bilaash Windows
Loogu talagalay isticmaale caadi ah iyo adeegsade horumarsan, iyo gaar ahaan farsamo yaqaan kombiyuutar ama takhasusle, Maareynta iyo keydinta macluumaadka waa arrin muhiim ah oo jilicsan oo u baahan fiiro gaar ah iyo mudnaan badan. Iyo aaggan, aqoonta iyo adeegsiga hababka ama codsiyada ugu fiican ee lagu cidhiidhinayo iyo hoos u dhigida xogta qalabka ayaa muhiim ah.
Tan iyo daqiiqad kasta, Xog kasta oo ku saabsan qalab kasta ama kaabayaal dhaqaale badanaa waxay u baahan tahay in la keydiyo, la dhaqaajiyo, la wadaago oo xitaa la ilaaliyo, iyadoo la adeegsanayo qaababkan ama barnaamijyadan., maaddaama ay hagaajinayaan oo ay fududeeyaan shaqooyinkan, iyagoo hagaajinaya waqtiga iyo ilaha bannaan. Iyo sida iska cad haddii aan isticmaalno ama wax ka qabanno macluumaad fara badan ama macluumaad qiimo leh, tani waxay kordhineysaa waqtiga lagu maareynayo iyo halista ay saameyn ku yeelan karto si uun.
Waayo, Xakamaynta faylka / kala-goynta waa farsamo ama farsamo aad u fiican oo loo isticmaalo in lagu yareeyo waqtigan, booska, amniga, iyo arrimaha asturnaanta ee maaraynta xogta la keydiyay iyo kuwa la isticmaalay. Sababtoo ah riixitaanku wuxuu u oggolaanayaa faylasha in laga dhigo cabbir yar, si markaas ay uhelaan boos yar oo loola dhaqmi karo (la koobiyeyn karo / loo dhaqaajin karo) si ka dhaqso badan, oo amni ahaan iyo qarsoodi ahaanba.
Habab kasta ama codsi kasta wuxuu badanaa u adeegsadaa algorithms kala duwan oo xisaabeed ah isku-buufinta / kala-goynta, qaar ka fiican ama ka waxtar badan, ka waxtar badan ama ka ammaan badan kuwa kale. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira xulashooyin badan oo kala duwan oo la kala dooran karo oo ku saabsan Nidaam kasta oo Operating gaar ah, iyo xitaa mid ka mid ah dhowr, taas oo ah, iyagu waa aalado badan. In kasta oo ay jiraan baaxad ballaaran oo la heli karo, waxaa jira qaabab badan oo isku-dhejin ah ama farsamooyin ah, sida: Tar, Zip, iyo Rar.
Farsamooyinka riixitaanka waxaa loo isticmaalaa in guud ahaan la yareeyo booska dhammaan xogta, sida dukumiinti ama galka ay ka buuxaan oo leh hal ama dhowr nooc oo qaabab isku mid ah, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa kiiska, tusaale ahaan, fiidiyowyo, maqal iyo muuqaallo, si loo helo hoos u dhac ku yimaada cabbirka, marar badan oo ay u huraan tayadooda (xallinta), oo sidaasna u keydiyaan meel disk ah oo ay u fududeeyaan isla khadka tooska ah kuwaas qalab aan fiicnayn ama xiriirro casri ah (xawaare).
Ugu dambeyntiina, waa in la ogaadaa in algorithms-ka xisaabeed ee hadda jira iyo kuwa kala duwan ee isku-xoqidda ay xogta ka dhigeyso meel yar oo diskiga ah, waxay adeegsadaan laba hanaan oo loo yaqaan: Cadaadis la’aan iyo Khasaare lumis. Labada nooc ee cadaadiska oo leh faa'iidooyin iyo qasaarooyin u gaar ah, oo lagu baari karo daabacadaha kale ee internetka.
Sidaan horeyba u sheegnay Nidaamka deegaanka ee hadda jira ee loogu talagalay maareynta cadaadiska faylasha (feylasha) iyo xogta guud ahaan Isticmaalayaasha iyo Nidaamyada Howlgalka waa mid aad u ballaaran, gaar ahaan GNU / Linux, sidaa darteed waxaan ku xusi doonnaa hoosta, annaga oo u kala saarayna 2 qaybood: Degaanka iyo Jawiga Astaamaha.
Laga soo bilaabo Terminal
Iyada oo loo maro terminaalka, codsi kasta sida caadiga ah waxaa lagu rakibaa iyadoo ku xiran hadba halka loo yaqaan 'Distro'. Tusaale ahaan:
Codsiyada la heli karo
In kasta oo ay jiri karaan kuwo badan, kuwa ugu fiican ee la yaqaan loona isticmaalo, iyo in badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu rakibay si aan caadi ahayn, inta badan Qaybinta GNU / Linux waa:
arj: (Buug gacmeed / manpage)
bzip2: (Buug gacmeed / manpage)
gzip: (Buug gacmeed / manpage)
lhaa: (Buug gacmeed / manpage)
libaax: (Buug gacmeed / manpage)
lzma: (Buug gacmeed / manpage)
p7zip: (Buug gacmeed / manpage)
sharutils: (Buug gacmeed / manpage)
rar: (Buug gacmeed / manpage)
daamur: (Buug gacmeed / manpage)
aan dhicin: (Buug gacmeed / manpage)
dib u dhac: (Buug gacmeed / manpage)
lacag la'aan ah: (Buug gacmeed / manpage)
fadlan: (Buug gacmeed / manpage)
xz-utils: (Buug gacmeed / manpage)
zip: (Buug gacmeed / manpage)
zoo: (Buug gacmeed / manpage)
Waxaad gujin kartaa mid kasta oo ka mid ah magacyada codsiyada kor lagu soo sheegay si aad uga hesho "Maktabadda Rasmiga ah ee xirmooyinka DEBIAN" si aad wax uga ogaato waxa ku jira, qaabdhismeedkiisa iyo helitaankiisa., ama mid kasta oo ku xigta midkoodna inuu ka helo "Buugga Rasmiga ah ee DEBIAN (Manpages)" ee isku mid ah, si loo sii xoojiyo isticmaalkiisa, gaar ahaan marka la eego isku xirnaanta amarrada la fulin karo.
Kuwa kale bilaash, u furan ama bilaash Windows
Sida aad u jeeddo, codsiyada laga heli karo GNU / Linux way badan yihiin, ha ahaato Terminal oo keliya, inta badan ay adeegsadaan dadka horumarsan ama kuwa farsamada isticmaala, ama bay'adaha garaafka ah, oo badanaa adeegsadayaasha aasaasiga ah ama qofkasta u adeegsada ujeedooyin fudud. Badankood waxay awood u leeyihiin inay la shaqeeyaan dhowr qaab, iyo kuwa kale oo laga heli karo dhowr OS isla waqtigaas.
Laakiin iyada oo aan loo eegin noocyada kala duwan ee jira, iyo isticmaalkooda badan, shaqooyinkooda iyo awoodooda, Waxaan rajeyneynaa in daabicadani ay fuliso hadafkeeda ah in aan kugu ogeysiino jiritaanka isla oo waxay ku siinayaan suurtogalnimada inaad uga faa'iideysato mid walba kartidiisa. Haddiise aad rabto inaad la tashato qoraallada kale ee la xiriira blogga waxaan kugula talineynaa kuwan 2: Sida loo cadaadiyo loona kala furfuro faylasha ku jira Linux y Iyada oo ay la socoto terminal-ka: Isku cadaadi oo faylalka jajab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo maareeyaa faylasha isku dhafan ee GNU / Linux?
Maqaal wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa haddii ay suurtagal tahay inaad sidoo kale sameyso maqaal ku saabsan sida loo rakibo Peazip-ka Linux isla markaana aad u muujiso sida looga gudbo isku-darka maareeyayaasha faylasha sida Nautilus / Files ee Gnome iyo Dolphin ee KDE.
Waayahay, waad ku mahadsan tahay soo jeedinta.
NetworkManager 1.16 oo hadda lagu heli karo astaamo badan oo cusub
GauGAN: NVIDIA AI wuxuu sawirro u rogayaa muuqaalka sawir qaadaha